Ahoana ny fomba hahazoana Photoshop Elements maimaim-poana ara-dalàna sy azo antoka
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Photoshop Elements maimaim-poana
By Eva Williams, Mathis Ravatomanga 2022-04-27, Malagasy Blog
Lisansa: $ 99,99
Fantatrao ve hoe aiza ary ahoana no ahazoana andrana maimaim-poana amin'ny Adobe Photoshop Elements? Mampidi-doza ve izany ary tsy ara-dalàna ny misintona kinova piraty? Inona avy ireo safidy tsara indrindra ao amin'ny 2022 ? Tadiavo etsy ambany ny valinteninao rehetra.
Adobe Photoshop Singa dia somary tsotra Sal Version nanova (hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba ahazoana maimaimpoana ny Lightroom na alaina Maimaimpoana Photoshop). Na dia lafo sy mora ampiasaina aza izy io dia manana fiasa mahery vaika amin'ny fanovana. Noho ny fanampian'ny programa dia azonao atao ny manodinkodina ny sarinao amin'ny alàlan'ny fanamarihana marika amin'ny teny lakile ary mametraka azy ireo ao anaty rakipeo. Ankoatr'izay, amin'ny alàlan'ny fanekena ny tarehy sy ny tag mandeha ho azy dia mety hahita olona iray ianao afaka segondra vitsy.
Ny kinova Adobe Photoshop Elemen 2022 farany dia noforonina ho an'ny asa haingana. Rehefa manokatra ity fampiharana fanovana sary ity ianao, dia hitanao ireo sary mihetsika namboarina ho azy, ary koa sary sy horonan-tsary amin'ny sary eo amin'ny efijery lehibe. Miaraka amin'ny torolàlana iray isaky ny dingana sy fiasa mandeha ho azy, azonao atao ny mamorona sary tsara tarehy ho mpankafy amin'ny fanovana. Ity programa ity dia fitaovana lehibe hahatsapany hevitra mamorona ho an'ny vao manomboka.
Azonao atao ny misintona hetsika Photoshop maimaim-poana, maimaimpoana Photoshop overlay, lamba Photoshop maimaim-poana, ary borosy Photoshop maimaim-poana mba hahatonga ny fanodinana aoriananao haingam-pandeha sy ho matihanina. Raha te- sary Photoshop haingana sy matihanina ianao fa vaovao amin'ny Photoshop, dia jereo na izany Fampianarana Photoshop izany izay mora sy mora takarina.
RAM: RAM 4 GB (soso-kevitra 8GB)
CPU: 1.6 GHz na processeur haingana kokoa / 64-bit Intel processeur multicore
Filename: PhotoshopE Element_2022_LS30_win64.zip (misintona)
Filename: PhotoshopE Element_2022_WWEFDJ.dmg (misintona)
Rindrambaiko mitovy amin'izany
Tombontsoa azo avy amin'ny Photoshop Elements
Sintomy Photoshop Elements maimaim-poana